Midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Dalalka Maraykanka iyo Shiinaha | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Dalalka Maraykanka iyo Shiinaha
Midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Dalalka Maraykanka iyo Shiinaha
Midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday 14 dal oo muwadiniintooda loo arko inay badqabaaan kuwaas oo loo ogolaan doono inay qaaradaas booqdan wixii ka bilawdo kowda luulyo,
Iyadoo uu jiro Cudurka Coronavirus. Dalalka Maraykanka Brazil, iyo Shiinaha ayaa ka mid ah dalalka laga mamnuucay inay booqdan Qaaradda Yurub.
Dalalka la ogolaaday ayaa waxaa ka mid ah Australia, Canada, Japan, Morocco iyo kuuriyadda koonfureed.
Waxaa xuduudaha la isugu furay muwadiniinta yurub ku nool ee safarada isaga dhex gooshaya, waxaase si gooni ah loola macaamila muwadiniinta UK kadib markii dalkaasi ka baxay Qaaradda Yurub.
Dawlada Ingiriiska ayaa ku jirta wada xaajood ku aadan waxaa loogu yeedhay” buundooyinka hawada”oo ay la leedahay waddamo ka tirsan midawga yurub , si aan Fayraska Corona u horjoogsan fasaxa xagaaga oo ah ka ugu mashquulsan Qaaradda Yurub isla markaana ay malaayin qof ka helaan shaqo.
Previous articleHay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo digtay in halista Covid-19 ay ka diri doonto mustaqbalka dhaw
Next articleGaroonka Kubadda Cagta ee Stadium Muqdisho oo Maanta dib loo Furi doono
AKHRISO:- Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed oo Magacaabay Guddi
Khasaaro ka dhashay weerar ka dhacay Jubbada Hoose